Kedu laptọọpụ Acer ị ga-azụ? Ọ bụ ezigbo ika? Echiche m
La Acer ika malitere dị ka onye ọbịa zuru oke nye ọtụtụ. Mgbe emechara ya na 1976, ha mere ihe ngosi mbụ ha na ụwa nke ịgbakọ na ngwaahịa ndị a na-ahụghị na West. Kama, ọ ghọwo ugbu a akara ngosi, akara ngosi nke àgwà nwere ọnụ ahịa dị mma.
Ya mere, ụdị akwụkwọ ndetu a bụ kwekọrọ na ntụkwasị obi, arụmọrụ dị mma na site na otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ ahụ, na-eto eto ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-ere akwụkwọ ndetu kachasị n'ụwa, yana HP, Lenovo, Dell, na Apple.
1 Laptọọpụ Acer kacha mma
2 Ụdị akwụkwọ ndetu Acer
2.1 Acer nwewa
2.4 Acer Nitro na Predator
3 Acer ọ bụ ezigbo akara laptop?
4 Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Acer dị ọnụ ala?
5 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Acer dị ọnụ ala
6 Laptọọpụ Acer, ọ bara uru ya? Echiche m
Laptọọpụ Acer kacha mma
Ụdị akwụkwọ ndetu Acer
Acer, dị ka ndị asọmpi ya, na-enye a ọtụtụ usoro na ụdị e mere iji gboo mkpa dị iche iche. Ụzọ nke ịghara ịhapụ onye ọ bụla, na-enye ngwá ọrụ na-adaba na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmasị na mkpa ọ bụla.
Ka ịhọrọ nke ziri ezi, ị kwesịrị ịma ihe nke ọ bụla n'ime ya usoro:
Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị ezubere maka ọtụtụ ndị ọrụ, na-eme mgbanwe nke ọma maka ọrụ ụbọchị na oge ntụrụndụ. Ha nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọrụ niile. Ya mere, ọ bụ nhọrọ mmeri ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ banyere nke ịzụta.
Ọ bụ usoro nwere ụdị nwere nlezianya karịa, ọmarịcha imewe, yana ọkpụrụkpụ dị oke mkpa. Ya bụ, ha bụ Acer's ultrabooks nke o bu n'obi kwalite mmegharị ya, na-abawanye nnwere onwe yana ibelata ibu na olu.
Ụdị ụdị laptọọpụ ndị a yiri nke mbụ n'ihe gbasara njirimara, naanị na nke a, ha na-agbanwe agbanwe. Maka ndị na-achọ kọmpụta nwere ike ime ka laptọọpụ mgbe ụfọdụ, yana dị ka mbadamba nkume na ndị ọzọ.
Acer Nitro na Predator
Ọ bụ oke kachasị ike, ezubere maka egwuregwu. Modelsdị ndị a nwere oke ibu na nha, mana na-enye ngwaike kachasị ike niile, si otú a na-egbo mkpa nke ndị egwuregwu vidiyo.
Ha bụ akụrụngwa ejiri sistemụ arụmọrụ Google Chrome OS nyere. Sistemụ arụmọrụ kwụsiri ike, dabere na Linux, echekwara echekwabara, siri ike yana njikọta zuru oke na ọrụ igwe ojii Google, dị ka Gmail, Google Docs, Gdrive, wdg.
Ọ na-abụkarị nhọrọ kacha mma maka ụmụ akwụkwọ, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ngwa gam akporo iji rụọ ọrụ klas, na-enweghị nchegbu maka ịla n'iyi ma ọ bụ ọrụ ha, ebe ọ bụ na ihe niile ga-adị na ígwé ojii. Na mgbakwunye, ha dị oke ọnụ ala, yabụ nke ahụ bụ isi ihe ọzọ ị ga-atụle.
Banyere usoro, n'ezie ị na-ahụ na ị nwere akara usoro 1, 3, 5, na 7Nke a bụ naanị aha iji kọwapụta uru dị na usoro nke ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, na usoro Aspire, Aspire 3 bụ ndị dị ọnụ ala na nke kachasị mma, na Aspire 5 dị n'etiti, na Aspire 7 na-arụ ọrụ kacha mma (nakwa dị oke ọnụ).
Acer ọ bụ ezigbo akara laptop?
A ike amaghị ọtụtụ ndị nwere imeri ya na-eso ụzọ dabeere na ezigbo mma na nnukwu ọnụ ahịa. Nke a bụ ka Acer jisiri ike bata n'etiti ndị ukwu. Ya mere, ị nwere ike ijide n'aka na laptọọpụ nke ika a dị ezigbo mma.
Enwere ike ịsị na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ Taiwanese ga-adị nso na ike siri ike nke na-akọwapụta laptọọpụ nke ụlọ ọrụ America Dell, dị ka nhazi nke China Lenovo na HP nyere, yana ọnụ ahịa ndị dị n'okpuru ụfọdụ ndị asọmpi ya. Ya mere, enwere ike ịsị na Acer bụ otu n'ime ụdị ndị nwere mma itule na versatility.
Ma, n'agbanyeghị na ụfọdụ aghụghọ nwere ike iyi ihe a na-ahụkarị, nke bụ eziokwu bụ na Acer enweghị nchekwube banyere ya friji na ụfọdụ n'ime otu ha, dịka ọ na-eme ndị ọzọ nke asọmpi ahụ. Ya mere, ị nwere ike ịhụ akụrụngwa na-ejigide ụkpụrụ okpomọkụ nke ọma. Ọ bụ ezie na, n'eziokwu, ha abụghị ndị kasị ekpo ọkụ, ma ha adịghị eru ụfọdụ endemic nsogbu ndị otu dị ka Sony Vaio nwere.
N'ikpeazụ, uru ọzọ nke Acer bụ na ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị mma nke usoro, yana ọtụtụ ụdị. Ya mere, ị ga-ahụ a laptọọpụ na-n'aka dabara na mmefu ego na mkpa gị...
Kedu mgbe ịzụtara laptọọpụ Acer dị ọnụ ala?
Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ Acer n'oge ọ bụla, n'ihi na ha bụ ngwaahịa nwere oke mma / ọnụahịa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ zọpụta gị egoỊ nwekwara ike iji ụfọdụ ụbọchị ebe ị ga-ahụ ya na nnukwu ego. Dị ka ọmụmaatụ:
Black Friday: Fraịdee nke anọ na nke ikpeazụ nke ọnwa ọ bụla nke Nọvemba ị nwere ihe omume a ebe ọtụtụ obere ụlọ ahịa, nnukwu ụlọ ahịa, yana nyiwe ịre ahịa n'ịntanetị, na-etinye ngwaahịa ha dị ọnụ ala. Mbelata ego a na-adịkarị mma, ma nwee ike iru mbelata 20 ma ọ bụ 30% n'ọnọdụ ụfọdụ.
Ụbọchị Mbụ: Ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Amazon na ị na-akwụ ụgwọ maka ndenye aha gị adịchaghị, mgbe ahụ ị nwere ike iji ohere a ọzọ mee ihe n'elu ikpo okwu na-enye ndị ahịa Prime Prime ya onyinye pụrụ iche maka ha. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịnọgide na-eji uru nke ụdị akaụntụ a, ebe ọ bụ na ha ga-ezitere gị mbupu n'efu na ọ ga-abata ngwa ngwa n'ụlọ.
Cyber ​​MondayỌ bụrụ na ị chefuru ịzụta na Black Friday ma ọ bụ onyinye ị na-achọ adịghị, ị nwere ohere ọzọ na-atọ ụtọ na Mọnde na-esote Black Friday. Ọzọkwa, ụlọ ahịa na-etinye ego dị oke mkpa na ngwaahịa ha niile, ọ bụ ezie na oge a, ọ bụ nkwalite na-emetụta karịsịa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ Acer dị ọnụ ala
N'ịbụ ụdị a ma ama, ị nwere ike ịhụ akwụkwọ ndetu Acer n'ọtụtụ ụlọ ahịa na-ahụkarị. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-emerịrị ya isi ụlọ ahịa dị ka:
Amazon: The American ahịa ikpo okwu nwere otu n'ime nnukwu onyinye nke Acer ndetu. Ụlọ ahịa ịntanetị a nwere usoro niile nke ụlọ ọrụ a, yana ọtụtụ ụdị ya. Ị ga-enwe ike ịchọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ị na-achọ, ọnụ ahịa ya dịkwa mma ma e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ị nwere nkwa na obi ike nke Amazon na-enye gị, na-enye gị ohere ịlaghachi ego ma ọ bụ iwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị tụrụ anya ya. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere Amazon Prime, ị nwere ike ịnweta ya ngwa ngwa n'ụlọ, na-enweghị ụgwọ mbupu.
Ụlọikpe Bekee: Agbụ ahịa ahịa Spanish na-asọ mpi n'ịre ngwaahịa teknụzụ. Ngalaba eletrọnịkị ya nwere ọtụtụ ụdị na ụdị kọmpụta, gụnyere Acer. Ọ bụ ebe a tụkwasịrị obi ịzụta akụrụngwa a, yana inye gị ohere ịhọrọ n'etiti ịzụrụ ngwaahịa a n'otu ebe ọ na-ere ahịa kacha nso, ma ọ bụ ịtụ ya na webụsaịtị ha ka ebuga ya n'ụlọ gị. N'ezie, ọ nweghị onyinye kacha mma ...
nrutu: yinye nnukwu ụlọ ahịa French nke ọzọ nwekwara ọnụọgụ abụọ nke nke gara aga. Ya bụ, ị nwere ike họrọ ịtụ gị Acer laptọọpụ online ma ọ bụ gaa na ụlọ ahịa center na ahịrị wee zụta ya ozugbo. N'okwu a, ọnụ ahịa na-abụkarị nke ziri ezi, ọ bụghị nke kachasị ọnụ ma ọ bụ dị ọnụ ala.
mediamarkt: Ọ pụtara maka ọnụ ahịa ya, ọ bụ ezie na ọ nwekwara njedebe ya dịka ọ na-eme na abụọ gara aga. Ị gaghị achọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke usoro na ụdị, n'ihi ya, ị ga-enwekwu nsogbu na nke ahụ. Ihe ị nwere ike ime bụ itinye usoro ahụ n'ịntanetị, ma ọ bụ zụta ya na ụlọ ahịa anụ ahụ.
Laptọọpụ Acer, ọ bara uru ya? Echiche m
Abụrụla m onye ọrụ ọtụtụ kọmputa Acer, yana nke m afọ ojuju adịla ezigbo mma. Ọ bụrụ na ị na-emeso ha nke ọma ma na-elekọta ha, ha nwere ike ịdịru ogologo oge. N'ezie, Aspire nke m tụfuru n'oge na-adịbeghị anya bụ ihe karịrị afọ 14 (2006), ma ọ ka na-arụ ọrụ, ihe na-adịghị emekarị n'ọnọdụ ndị ọzọ, nke na-adịru obere oge.
N'ezie uru maka ego Ọ bụ otu n'ime ihe kpaliri m ịzụta laptọọpụ ahụ, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na m na-achọ àgwà pụrụ iche na kọmpụta a nke ndị ọzọ na-enyeghị maka ọnụahịa ahụ.
Megide, ị nwekwara ihe shei Emeghị ha nke aluminom dị ka ọ dị n'ọnọdụ ndị ọzọ, yana ikekwe ọrụ teknụzụ abụghị nke kacha mma…
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » Lacer Acer